Izindaba - Ungazifaka kanjani izimonyo, zenze kube lula ngezinyathelo ezi-5 | Ubuhle beKalocils
Isinyathelo 1: Isithambisi
Ukufaka izimonyo kungubuciko. Isikhumba esibushelelezi, esithambile siyinto yakho enhle kakhulu. Ukufeza lokhu udinga amafutha okuthambisa. Geza ubuso bakho bese ugcoba ngokukhululekile, unike isikhumba sakho imizuzu embalwa ukumunca i-lotion noma isifutho.
Isinyathelo 2: Primer
I-Primer isiza ukulungisa isikhumba sakho sokufihla kanye nesisekelo, iqinisekise ukuthi ziqhubeka kangcono futhi zihlala isikhathi eside. Iphinde ifihle noma imaphi amaphutha futhi inciphise ukubonakala kwepore. Faka isicelo ebusweni nasentanyeni.
Isinyathelo 3: Ipensela Yeshiya
Amehlo amahle abalulekile, abenze bagqame ngepensela yamashiya. Landela umugqa wemvelo webunzi lakho usebenzisa umbala olula kancane kunezinwele zakho.
Isinyathelo 4: Eyeshadow, Eyeliner & Mascara
Nikeza ukujula nencazelo emehlweni akho ngesithunzi ne-liner. Sebenzisa izithunzi ezintathu zamehlo, uqale ngombala olula kunayo yonke ngaphansi kweshiya lakho bese kuba umbala omnyama kakhulu kusivalo sakho. Bahlanganise ukugwema noma yimiphi imigqa esobala. Bese usebenzisa i-liner yeso eduze kwesivalo ngqo ngenhla kwemivimbo yakho. Sebenzisa i-mascara ukugqokisa nokuhlukanisa konke ukuqhuma, ubanikeze ukubukeka okujiyile, okunempilo.
Isinyathelo 5: Lipstick, Liner & Lip Gloss
I-Lipstick ingenye yezingxenye eziguquguqukayo kakhulu zokubukeka kwakho. Ungaxuba futhi uqondanise imibala ngokususelwa kumzwelo wakho, isembatho noma ngisho nesikhathi sosuku. Ngokulinganayo gcoba i-lipstick bese ulayini izindebe zakho, uqedele ngongqimba lwe-gloss.
Ukuqhuma Kwamehlo, i-eye liner, ezambiwa, Izandiso ze-Eyelash, Abadayisi bezinkophe, imivimbo ye-mink,